Xukuumadda Rawaafida Ciraaq oo ka mamnuucdey Shacabka Sunniyiinta iney soo galaan magaalada Baqdaad. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xukuumadda Rawaafida Ciraaq oo ka mamnuucdey Shacabka Sunniyiinta iney soo galaan magaalada Baqdaad.
On Feb 13, 2016 234 0
Dadka Muslimiinta ah ee ku dhaqan wadanka Ciraaq waxay la kulmayaan tacadiga iyo dhibaatooyinka daran ee kaga imaanaya dhanka Xukuumadda Raafidada Ciraaq iyo shacabkeeda shiicada ah, waxaana tan iyo markii Rawaafida talada dalkaas ay Mareykanku ku wareejiyeen ay Muslimiintu ahaayeen kuwa ku nool dhibaatooyin kala duwan.
Inkastoo haatan dhul ballaaran oo kamid ah dalka Ciraaq lagu maamulo Shareecada Islaamka oo ay ka taliso dowladda Islaamiga ah hadana wali waxaa sii socda dhibaatada lagu hayo dadka Muslimiinta maadaama caasimada ugu weyn dalka ee Baqdaad ay gacanta ku hayso Xukuumadda Rawaafida.
Dhawaan Xukuumadda Baqdaad waxay ku dhawaaqdey Mashruuc lagu sugayo sida la sheegay amaanka magaalada Baqdaad si looga hortago weerarada, waxaana baro Kontorool oo aad u adag la dhigay jihooyinka kala duwan ee magaalada Baqdaad, waxaana guud ahanaba la mamnuucey in magaalada uu soo galo qof Sunni ah.
Dadka sida gaarka ah loo bartilmaameysanayo ayaa ah dadka dega gobolka Salaaxu-Diin ee ay degaan Sunniyiinta, waxaana qofka marka uu soo gaaro baraha Kontoroollada ee u dhow Baqdaad la waydiinayaa halka uu ka yimid, hadii uu ku jawaabo Salaaxu-diin waxaa lagu amrayaa inuu ku noqdo halkii uu ka yimid iyadoo caga julgeyn xoogan uu la kulmayo.
Calaa Yaasin waa Diktoor ka shaqeeya Cisbitaal ku yaala magaalada Baqdaad, balse waxa uu booqasho ku tagay qabyo kamid ah Salaaxu-diin, markii uu kusoo laaban rabay Baqdaadna waxa uu la kulmey arin uu la yaabey taas oo ahayd in lagu amray inuu u noqdo halkii uu kayimid.
Inkastoo uu yahay xubin kamid ah Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Rawaafida hadana arinkaas waxba uma tarin, waxaana Askigii Kontroolka joogay uu tusay ID-Cardkisa muujinaya inuu dowladda katirsan yahay.
Askariga ayaana arinakas ku gacan seyray, waxaana uu sheegay in amarkan uu yahay mid sare oo kasoo baxay Xukuumadda dalka islamarkaana uusan jabin karin.